Sida loo kala qaybsan tahay clip ah oo ku saabsan Mac / iPhone / iPad
Video clip A (movie) waxaa loo kala qeybin karaa, weheliso files kale si ay u sameeyaan files la maarayn. Tageynaa waxaa loo sameeyaa, tusaale ahaan in lagu daro kala guurka ah ee u dhexeeya clip asalka. Lafdheerta filim awood u Tifaftiraha si ay u xusaan bilowga iyo dhamaadka dhibic clip ah.
Qaybta 1aad: Sida loo kala qaybsan tahay clip ah ee iMovie on Mac
Qeybta 2: Sidee in aan kala tagno clip ah ee iMovie on iPhone / iPad
Qeybta 3: Sida loo kala qaybsan tahay clip ah oo ku saabsan Windows isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate
Si loo fuliyo qaybsama ee clips iMovie isticmaala feature dheeraad ah loo yaqaan Editor sax ah. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku kala jabeen clip ah ee iMovie isticmaalaya Editor sax ah.
Dejinta clip ah adigoo riixaya badhanka warbaahinta dejinta.
Dooro clips isha.
Riix Import All sida ku cad jaantuska ku xusan.
Ku dar shot balaadhan oo si waqtiga.
Jar saddex ilbiriqsi ka dhamaadka shot ballaaran.
Jar 3.9 ilbiriqsi laga bilaabo ka-dhow.
Si loo joogteeyo sii mooshin click on Window> Editor Show qiray.
Markaas jiidi-ga ee sidan oo kale in ay ku milmaan ay tallaabo caadi ah.
Markaasuu ugu dambeyntii qabsato guurka ah ee si aan u ilaalinno sii, laakiin si ay u dhinto tallaabo hore.
Ka bixidda Editor sax ah.
Haddii aadan rabin in aad isticmaasho Editor sax ah oo ku saabsan iMovie oo si fudud u doonayaan in ay u kala clip ah sida in, raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Split clip sayidkii laba goobaha.
Dalagyada iyo qashinka qeybo ka mid ah sawirada loo isticmaali maayo.
Markaas magaca ah clips ka harsan tahay.
Markaasuu ugu dambeyntii qabsato guurka ee inay la midowdo labada clips muuqan.
Waxaan isticmaaleynaa ah app xisbiga saddexaad (Slim) si ay u muujiyaan geedi socodka.
Ku dar videos in ay slimmer video ah.
Tubada ku clips ku daray in ay caabudaysaan daaqad goo.
Riix slider oo ku jiidin dhibic bilowga.
Riix badhanka bilowga si loo xaqiijiyo in aad doorashada.
Jiid slider in ay hal dhibic dhamaadka.
Hadda riix badhanka sameeyey dhankiisii ​​midig sare uga baxdo.
Ugu dambeyntii, ka jaftaa Slim Hadda.
Clips ayaa waxaa lagu baabbi'in doonaa iPad isticmaalaya App Slim ah.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa aalad diinta video wanaagsan la Koox ka mid ah muuqaalada dhamaadka sare iyo hawlaha. Qeybta ugu wanaagsan waa in ay taageerto dhawaad ​​qaab video in aad ka fikiri karaa oo wuxuu sameeyaa wax alla waxaad u baahan tahay in qasabno oo kaliya dhowr kasta. Ku dar in 30x dhakhso video diinta ka dhigaya noloshaada si sahlan, waxaad ka heli doontaa in software utility Tanuna waa ducadii haddii aad dhab ahaantii galay la videos shaqeeya waqtiga oo dhan.
Ka dib waa qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Video Converter Ultimate.
Beddelaan DVDs shakhsi ahaan isticmaalka
Beddelaan videos ka mid qaab mid kale, oo ay ku jiraan 3D
Bedelka jeesan oo lagala soo bixi video ka badan WiFi
Guba videos in DVDs
Edit videos iyo darto saamaynta hor diinta / guba
Download videos ka goobood geeyo online sida Youtube oo dheeraad ah
Sidaas darted, haddii aad diyaar u tahay in ay hadda isku dayaan, waa in aad ka soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate ee halkan . Marka aad samaysay in, raac tallaabooyinkan in aan kala tagno wax kasta oo clip / video on Windows isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Burcad Wondershare Video Converter ka menu barnaamijyada.
Riix si shuban clips maktabadda warbaahinta dari files.
Dooro files ka computer ah (haddii kale, jiididda iyo hoos u faylasha) in waqtiga.
Split clips adigoo gujinaya edit ka click keentay menu midig.
Suuqa ayaa soo socda la dooran karo goo muuqan doonaa.
Riix badhanka OK si aad u hesho ka mid ah suuqa kala qaybsama.
Riix badalo aad u bilowdo nidaamka qaybsama.
Sida loo soo dhoofsadaan YouTube Videos in iMovie
Sida loo abuuro Picture iMovie ah ee Picture
Sida loo isticmaalo iMovie in Edit Videos iyo Samee Home Movie
> Resource > iMovie > Sidee in aan kala tagno clip ah oo ku saabsan Mac / iPhone / iPad